Northeastern University (chithunzi chekuwedzera kuti chiwedzere). Photo Credit: Marisa Benjamin
Northeastern isunivhesiti huru iri pedyo neBoston's Back Bay neFenway. Nhamba yekumabvazuva inonyora vanenge vanenge 20 000 vanoita zvidzidzo pasi pepamusoro, uye kunyorwa kwevadzidzi vanenge pasi pe30 000 chete. Pamapurogiramu makumi matanhatu nemazana matanhatu anowanikwa kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva, mamwe emhando dzakakurumbira anosanganisira mabhizinesi, mabhuku, mabhuku ekukurukurirana, kushambadzira, sayenzi yezvematongerwo enyika uye psychology.
Imwe yenharaunda yeNortheastern yekusiyanisa ndiyo purogiramu yayo ye co-op umo vadzidzi vanopedza gore rezvidzidzo zvavo vachishanda nguva yakazara kune imwe kambani mumabasa avo emabasa. Vakawanda vekuchamhembe kwekumabvazuva vanopedza kudzidza mukati memakore mashanu, vachipedza gore rimwe chete purogiramu yekubambisana.
Northeastern Admissions Center (chingaidza chithunzi kuti uwedzere). Photo Credit: Marisa Benjamin
Northeastern's Admissions Visitor Center, paimba yekutanga yeBehrakis Health Sciences Center, inomirira nzvimbo inogamuchirwa pamusasa. Nzvimbo dzakawanda dzekuNortheastern dzakatungamirirwa uye dzeboka dzinotanga kuenda kuAdmissions Visitor Center. Vanhu veyunivhesiti yekugamuchira vanhu vakabatikana - muna 2011 vakagamuchira zvikwereti kubva kune 43 255 vadzidzi. Inenge chikamu chechitatu chakabvumirwa.
Kuti udzidze zvakawanda pamusoro pemitemo yeAd Northeastern's admissions, nyaya idzi dzinogona kubatsira:
GPA, SAT uye ACT Girafu yeNortheastern
The Blackman Auditorium kuNortheastern University
Northeastern's Blackman Auditorium (chithunzi kuti uwedzere). Photo Credit: Marisa Benjamin
The Blackman Auditorium paHuntington Avenue inzvimbo huru yemitambo ine orchestra nebhokisi. Inogara vateereri vanopfuura 1 000 uye ayo acoustics yakagadzirirwa kuenda pamwe-kusvika kumakuru-mienzaniso. The Blackman Auditorium inoshandiswa pamakirasi, zvidzidzo, mafirimu uye mimhanzi.
Dr. Jack Levin, nyanzvi yakakurumbira yekupomerwa mhosva uye co-mukuru weNortheastern Brudnick Center pamusoro peKunetsana uye Chisimba, anodzidzisa kirasi yakakurumbira, "Sociology of Violence and Hate," muBlackman Auditorium. Ukuru hwemzvimbo yacho inotakura boka guru rekukura kwevadzidzi vanenge 200.
Chifananidzo cheNortheastern's mascot, husky, chimire kunze kweBlackman Auditorium.
Richards Hall kuNortheastern University
Chikoro muRichards Hall kuNortheastern (chithunzi mufananidzo kuti uwedzere). Photo Credit: Marisa Benjamin
Richards Hall inonyanya kuyambuka kubva kuNortheastern University's T station, kuHuntington Avenue. Richards Hall anovakira mahofisi uye makirasi.
Iyi yekirasi muRichards Hall zvigaro pamusoro pevadzidzi zana uye yakagadzirwa multimedia teknolojia. Vavhareji vemakirasi ekirasi kumaodzanyemba kwakadziva makumi maviri nevadzidzi, vane mudzidzi kune chikwata chechikoro che14: 1.
Curry Student Centre kuNortheastern
The Curry Student Center kuNegehekumabvazuva (chithunzi mufananidzo kuti uwedzere). Photo Credit: Marisa Benjamin
Curry Student Center iri pakati pekambani, uye maererano naizvozvo, iyo ndiyo nzvimbo yeNortheastern community. I "Indoor Quad" inzvimbo yakakurumbira yekuonana-pakati pevadzidzi.
Curry Student Centre ine chikafu paimba yekutanga, iyo ichangobva kugadziriswa kuti ipe zvivigiro 150 zvekare nevatengesi vatsva, kusanganisira Burger, Chick-Fil-A uye pamwe chete pizza.
Curry Student Centre ine makirasi akawanda uye makamuri okudhanha emapoka evadzidzi, pamwe nebhokisi rakakura rakakura yezviitiko zvikuru. Iko kunewo makamuri ekuungana emapoka evadzidzi nemakamuri makuru ehurukuro. WRRB, nhepfenyuro yeredhiyo yekumadokero, inoshanda kunze kweC Curry Student Centre.
Dodge Hall neNortheastern's College of Business
Dodge Hall kuNortheastern (chithunzi mufananidzo kuti uwedzere). Photo Credit: Marisa Benjamin
Dodge Hall ane dzimba dze Northeastern's College yeBusiness Administration, iyo inopa zvose zvidzidzo zvepamusoro uye zvidzidzo. Zvinonyadzisa paCBA zvinogona kutevera kana Bachelor yeScience muBusiness Administration kana Bachelor yeScience muBhizinesi reMabhizimisi, uye zvino sarudza mhanho mumatunhu manomwe ekudzidza, kusanganisira kubhadhara, kutungamira, kushambadzira maitiro uye kutengesa.
CBA inopawo vana vaduku vari mumashamba ekubuda, kushandiswa kwemabhizimisi evanhu uye bhizimisi rakagadzikana kune vose vasiri vhizinesi uye vadzidzi vebhizimisi.
International Village ku Northeastern University
International Village muNortheastern (click photo to enlarge). Photo Credit: Marisa Benjamin
Northeastern's International Village imwe yezvigaro zvekugara uye dzimba dzokudyira dzimba pamusasa. Ichowo chimwe chezvivako zvitsva zveyununivhesiti, kunyanya kune vadzidzi vadzidzisi vekudzidzira kana kuti nhengo yeYunivhesiti yeChechi yeHurumende. Imba mitatu yemasvingo anenge anenge 1 200 vadzidzi.
Mukuwedzera kune dormitori, International Village ine nzvimbo yehutano, zvivako zveTV, zvivako zvekuchenesa, mabhii emifananidzo uye Internet Café.
Imba yekudyira yakabatanidzwa kune imwe nzvimbo inopa kusarudzwa kukuru kwezvingasarudzwa, kusanganisira chidimbu, kuvhara, nzvimbo yebourgger, maidhi inopinda, zvokudya zveguten-pasina, sushi, pizza, soup, bhaji yebhadhi, uye Indian food.
Marino Recreation Center kuNortheastern
The Marino Recreation Center kuNortheastern (chithunzi mufananidzo kuti uwedzere). Photo Credit: Marisa Benjamin
The Marino Recreation Center ndiyo nzvimbo yekuvaka muviri uye yezororo inonzi Northeastern. Mukuwedzera kumusika wezvokudya uye nekutengesa paimba yekutanga, Marinowo ane dzimba dzebhasikiti uye dzekuvhota kwebolleyball, nhandare yakasununguka, nzvimbo yepamusoro yepamusoro, nzvimbo yekudzivirira nzvimbo, yemotokari yemotokari uye makamuri akawanda ezvikwata zvekufambisa.
Mimwe mitambo yemitambo iri mhiri kwomugwagwa, kusanganisira Cabot Centre ine inzira yekunze, yebindu yebhokisi yenyika uye matare eRacecballball. Northeastern inewo ine jadhi remadziro makumi maviri nemasere rekushambira muBarletta Natatorium.
Matthews Arena ku Northeastern
Matthews Arena ku Northeastern (click photo to enlarge). Photo Credit: Marisa Benjamin
Matthews Arena ndiyo yekare yakawanda inoshandiswa neathletic building ichiri kushandiswa munyika uye ine nhoroondo yepamusoro yakagamuchira US presidents, mashomanana ebhokisi, uye makonti.
Dare racho rakagadziridzwa zvikuru muna 2009, uye iye zvino yava musha kune mapoka eEngland kumahombekombe ehockey uye mashopu ebhasikiti, uye nehosi yevakadzi yehockey team.
Mukuwedzera kune mitezo yemitambo, Matthews Arena vanogara pamusasa-pamusangano zviitiko kusanganisira gore regore regore reChristfest uye mhemberero yekupedza.
Yunivhesiti minomwe mitambo yevarume vanomwe neyepfumbamwe yakasiyana-siyana. Nemaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweHuskies hukwikwidzana muColonial Athletic Association yemitambo yakawanda.
Mugar Life Sciences Building kuNortheastern
Mugar Life Sciences Building kuNegemastern (click photo to enlarge). Photo Credit: Marisa Benjamin
Simba reMugar Life Sciences rakagadzirirwa neDhipatimendi rePsychology, Dhipatimendi reBioology, Chimiro Chemakemikari uye Chikoro cheParamisi. Chivako chinogadzira ma laboratories akawanda uye makirasi. Yakapiwa kuNortheastern muna 1963 naStephen D. Mugar, mutsigiri wezvipo akatsigira kumayunivhesiti akawanda muBoston.
Snell Library kuNortheastern University
Snell Library kuNortheastern (chithunzi mufananidzo kuti uwedzere). Photo Credit: Marisa Benjamin
Snell Library ndiyo raibhurari yekuNetherlands yakanyanya pamusasa. Mukuwedzera kune mamiriyoni 1,3 mavhesi ayo ane, raibhurari inewo inogadzira Digital Media Design Studio nemagetsi makuru eMacro akachengetedzwa neAdobe CS5 software, yezve-in-art zvinyorwa zvekurekodha uye mifananidzo yevhidhiyo. Kune matatu yakawanda yemakombiyuta mabhizimisi anowanika kushandiswa kwevadzidzi. Iraibhurari iri yakazaruka maawa makumi maviri nemaviri, kuti igone dzidzo yevadzidzi pane chero nguva yezuva kana usiku.
Stetson East kuNortheastern
Stetson East kuNortheastern (chithunzi mufananidzo kuti uwedzere). Photo Credit: Marisa Benjamin
Stetson East inosanganisira imba yekugara uye yekudya. Stetson East ndiyo gore rokutanga, kubatanidza dorm neimba yepamusoro padzimba vanenge vanenge 300 vadzidzi. Kune makamuri maviri, maviri, uye matatu.
Levine Marketplace, imba yekudyira muStetson East, inopa zvokudya zvakasiyana-siyana, kusanganisira pizza, burgers, macaroni uye cheese uye pasta, uyewo chikamu cheganji. Vadzidzi vanofarira zvekudya zvekudya kwaStetson East, kunyanya omelettes. Imba yakapoteredza yekudyera, Stetson West, haisi kushumira kudya kwekudya.
Stetson West ku Northeastern University
Stetson West kuNortheastern (chithunzi kuti uwedzere). Photo Credit: Marisa Benjamin
Stetson West kune imwezve dhamendi dorm ine vanenge 500 vadzidzi. Icho chiri chimwe che "chikuru-housing" mahofisi emusasa, dzimba dzevadzidzi muunyanzvi, inyanzvi yemakombiyuta uye mapurogiramu esayenzi yehutano.
Imwe Stetson West yokudyira mukati meimba iyi inosanganisira flattop grill, cheese bar, station sandwich, oven brick uye zvivako zvinopisa. Stetson West's specialties inosanganisira stir-fry station uye gourmet pizzas. Haiti kushandura kudya kwekudya chamangwanani.
West Village iri kumaodzanyemba kweNorth East (click photo to enlarge). Photo Credit: Marisa Benjamin
West Village inzvimbo huru, yakawanda-yechipfuva inzvimbo yakakurumbira pakati pevadzidzi vechikoro. Inozivikanwa nehupfumi hwayo-ye-ye-art uye zvivako zvemazuva ano zvekugara, dzimba-style zvigaro zvakagoverwa dzimba dzisina dzimba kana dzimba mbiri. Iyo dzimba dzikava nekicheni dzine mazhenesheni uye zvinhu zvinoshandiswa mumarara, uye dambudziko racho rakaramba richikunda vhoti yevadzidzi ve "Best Upperclassmen Housing." West Village inoshamwaridzwawo nekuswedera pedyo neMusikirwo Wakaisvonaka, uye nokuda kwekunakisa kweBoston's skyline inowanikwa mune dzimwe dzimba.
Dzidza zvakawanda pamusoro peNorth East and what it takes to get accepted: Northeastern University profile .
Zvirongwa Zvokupemberera Samhain, Gore Ritsva
Chii Chinonzi Dombo Remvura?
Muvara Wakavhenganisa Chirongwa: Kusanganisa Mutsvuku
Zvinyorwa zvitsva kubva ku 'Old Yeller' (1956) naFred Gipson
Yoga Yechitanhatu Inofamba Nevashambira
ChiGermany Kupedzisira Kusarudzwa: Nyaya Yokududzira
Ndinofanira Kuwana Dhigirii Rokuchengetedza?
Dzidza Kuti Ungatakura Sei Mutsvuku Wemafupa Pistol Ne Blanks
Izvi Ndizvo Zvakanakisisa Mapfumo Anoita Makumi Makore: 2010-2020
Dzidzo yeMotokari - DMV - Shanduro yeShoko reVadzidzi veChirungu
Chii chinonzi Java Overloading?
Persian War - Battle of Plataea
Pamusoro peRois Lowry's Controversial Book, "Mupi"
Mutsara weArt History - Maonero Akaratidzwa Masayenzi kubva 30,000 BC-400 AD
Chii Chinogadzira Mumwe Munhu "Akanaka" Munyori?
Pamwe paSirasi Mugwagwa - Archaeology uye History of Ancient Trade
Nhasi-Day Shona (PDE): Tsanangudzo uye Mienzaniso
Inofanira Kuverengerwa Chikoro-Bound Students
Vana neMhuri Mafirimu Akabudiswa muna 2015
Mutangi wekuGermany: Inzwai uye Dzidza Mashoko Emhuri Mhuri